भोलि भदौ ७ गते आइतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/भोलि भदौ ७ गते आइतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल!
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ। अधिक परिश्रम पश्चात पनि सफलता नमिल्दा मन निराश रहला। सन्तान सम्बन्धि कुराले मन चिन्तित रहन सक्छ। यात्रा गर्दा विशेष सावधान रहनुहोला। सरकारी क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ।
पिता एवम पैतृक सम्पतिबाट लाभ मिल्न सक्छ। सरकारी क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। खेलकुद तथा कला क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुभ रहेको छ।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि शभ समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसंग प्रशन्न रहनेछन्। भाग्य वृद्धि हुनेछ। यात्राको योग रहेको छ। दाजु-भाईको भरपूर सहयोग मिल्नेछ। परिवारमा सुखमय वातावरण रहनेछ।
स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। परिवारका सदस्यसंग मनमुटाव हुनसक्छ। खर्चमा वृद्धि हुँदा आर्थिक समस्या आउनसक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अनुकूल छैन। अनैतिक कार्य गर्नबाट बच्नुहोला। मनमा ग्लानिको भावना रहन सक्छ।
सामाजिक मान-प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो क्रोध र वाणीमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रूपले बित्नेछ। बुवाबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ। तपाईंको आत्मविश्वास तथा मनोबल उच्च रहनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। मित्रगणसंग मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। आकस्मिक धन खर्च हुने सम्भावना रहेको छ। धार्मिक आयोजनामा उपस्थित हुने अवसर मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल नरहला।
आयका स्रोत बढ्नेछन्। व्यापार व्यवसाय बिस्तार हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा वैवाहिक सुख प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ। यात्राको योग रहको छ। साथी-भाईसंग आनन्दमय समय बित्नेछ। धन लाभको योग रहेको छ।
पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ। आयवृद्धि हुनेछ। पदोन्नतीको योग रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। सामाजिक मान-सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। हरेक कार्य सरलतापूर्वक सफल हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा समय अत्यन्त शुभ रहेको छ।
शारीरिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसंग मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। आफ्नो क्रोध तथा उग्र व्यवहार नियन्त्रण गर्नुहोला। सन्तान सम्बन्धि कुराले मन चिन्तित रहला। व्यापार व्यवसायमा समय अनुकूल देखिदैन।
क्रोधमा संयम राख्नु पर्ने देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। खान-पानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। मनमा नकारात्मक बिचार उत्पन्न हुनसक्छ।
सामाजिक मान-सम्मान बढ्नेछ। यात्राको योग बन्नेछ। विपरित लिंगी प्रति आकर्षण बढ्नेछ। तपाईंको आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीबाट लाभ मिल्नेछ। वाहन सुख मिल्ने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। क्रोध र वाणीमा भने संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। तपाईंको आत्मविश्वास बढ्नेछ।